Doorka haweenka ee doorashooyinka dalka oo laga hadlday – Radio Muqdisho
Doorka haweenka ee doorashooyinka dalka oo laga hadlday
Kulankan oo ahaa mid lagu daah furayey wacyi gelin la xiriirta sidii haweenku ay uga qeyb qaadan lahaayeen doorashooyinka la filayo 2016-ka , waxaa ka qeyb galay madax ka tirsan AMISOM, xubno matalayey Wasaaradda Haweenka Soomaaliya, maamulka degmada Waaberi iyo haween ka kala socday waaxyaha degmadaasi.
AMISOM oo hormuud u ah wacyi gelintan ayaa ugu talo gashay in haweenku ay door muuqda ku yeeshaan doorashooyinka la filayo iyo sidoo kale in la hubiyo in haweenku ay heleen qoondada loogu talo galay ee lagu sheegay in ay tahay 30% boqolkiiba sodon.
Guddoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Xaawo Maxamuud Cali oo furitaanka kulanka hadashay ayaa sheegtay in wacyigelintan ay door muuqdo ka qaadan karto isku duubnida haweenka.
“Waa wacyi gelin ku aadan in dumarka ay helaan ka qeyb gal wanaagsan marka laga hadlayo doorashooyinka lafilayo sanadkaan”ayey tiri Xaawo Maxamuud Cali
Cadar Shalaqbeen oo ku hadleysay magaca Wasaaradda Haweenka iyo horumarinta xuquul insaanka ayaa sheegtay in Wasaaraddu ay ka qeyn qaadan doonto in la helo xuquuda dumarka.
“Mar walba waxaan diyaar u nahay in haweenka xaqooda ay u dagaallano, sababtoo ah inagaa ka mas’uul ah, hadda si gaar ah ayaan u hin doonaa in kuraastooda ay helaan”Cadar Shalaqbeen ayaa sidaasi tiri
Ku xigeenka madaxa AMISOM Ladia Wayotta ayaa muujisay in wacyi gelintan la gaarsiin doono meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, muhiimaduna ay tahay in mar waliba la muujiyo lagama maarmaanimada in haweenku ay doorkooda qaataan.
“Waa muhiim in haweenka ay doorkooda qaataan sababtoo ah xaq ayey u leeyihiin markaan, wacyi galintaan waxey gaari doontaa meelo badan oo Soomaaliya kamid ah”sidaasi waxaa tiri Ladia Wayotta
Faraax Cabdiqaadir oo gudbiyay dacwad ku saabsan faldambiyeed lala damacsanaa in la geliyo
Baarlamaanka oo meel mariyay hindise sharciyeedka Maxkamadda dastuuriga